4 Arimood Oo Haweeneydu Sameyso Markii Ay Jaceyl Kuu Qaado - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»4 Arimood Oo Haweeneydu Sameyso Markii Ay Jaceyl Kuu Qaado
Haweenka waxay u muuqdaan inay si aad ah ula xiriiraan shucuurtooda. Kahor inta aysan haweeney si buuxda jacayl kuugu qaadin waxay iska dhigtaa mid ka been sheegta dareenkeeda iyadoo ninka laga rabo inuu noqdo mid si adag u aqrin kara maskaxdeeda.
Si, kastaba, markii ay si qoto dheer kuu jeclaato, looma baahno markaas wax maskax aqrin ah, waxayna calaamadaha lagu garto ay noqdaan ku cad.
Halkaan waxaad ka akhrin kartaa 4 waxyaabood oo haweeneydu sameyso markii ay qaado.
Waxay jartaa ragga kale
Haweeney jacayl kuu qaaday waqti uma heyso ragga kale. Haddii ay shukaansan jirtay isla markaana ay waqti la qaadan jirtay si dhaqsi ah ayay u jartaa.
Waxay bilaawdaa inay ku fekerto inaysan faa’ido u lahayn raggaas sababtoo ah waxay heshay wuxuu qalbigeeda rabay.
Muuqaalkeeda ayay ka fekertaa
Waxay dooneysaa inay noqoto qof cajiib ah markay kula joogto. Way ogtahay inuu muuqaalkeeda uu muhiim yahay waxayna dooneysaa inaadan u arag qof aanan isqurxin ama dhankaas ka liidata.
Aad ayay uga taxadartaa nafteeda iyadoo ka fekerta waxaad ka aaminsantahay sidaa darteed dareensii inay ku qurxantahay qaabka ay tahay.
Aniga’ waxay noqotaa “anaga”
Waxay bilaawdaa inay istcimaasho “anaga” intay isticmaali lahayd “aniga” tani waxay ka dhigantahay inay aragto labadiina oo unug ah.
Uma muuqato iyadoo mustaqbal la yeelaneysa qof kale ama kaligeed ah. Maskaxdeeda ayaa waxaa gasay inay rumeysato inaad tahay ninka mustaqbalka.
Waxay bilaawdaa inay kuu xiisto oo ay kaa fekerto
Waxay bilaawdaa inay kuu sheegto sida ay kuugu xiistay iyo sida ay kaaga fekerto. In waxyaabahan oo dhan ay haweeney kuu sheegto ama qirato dareenkeeda waxay qaadataa dhiiri gelin badan balse markay jacayl kuu qaado way sahlan inay si fudud kuugu sheegto.
3 Astaamood Oo Lagu Garto In Ninkaaga Uu Necebyahay Guushaada
3 natural alternatives to shampoo you should try at home